Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » USA » Anọ n'ime ndị America ise na-eche na coronavirus bụ ruo mgbe ebighị ebi
Ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịkpachara anya dị ka mkpuchi na ịzere igwe mmadụ, ebe 73% na-akọ na ha "na-eyi ihe mkpuchi mgbe niile na ndị ọzọ."
Dabere na nyocha ọhụrụ nke Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mere, 83% nke ndị America gbara ajụjụ ọnụ kwenyere na ha 'ga-arapara na' akwụkwọ akụkọ coronavirus "ruo mgbe ebighị ebi" ma ọ bụ opekata mpe ogologo oge.
Azịza ndị mmadụ n'otu n'otu na ntuli aka ahụ gosipụtara mmetụta nke arụkwaghịm na ịmụta enweghị enyemaka.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị America nyochara zara n'usoro ndị ahụ, na-ekwu na ha ga-atụle ọrịa a "gafere" mgbe nje ahụ gbanwechara ghọọ "ọrịa dị nro."
Naanị 15% nke ndị zara ntuli aka kwenyere na a ga-ewepụ nje a dị ka polio. Ọnụ ọgụgụ na-eto eto kwuru na ha nwere ike iyi ihe mkpuchi ma zere igwe mmadụ ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga. Ndị zara ajụjụ zoro aka na akụkọ banyere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ikpe na ụlọ ọgwụ iji kọwaa ịkpachara anya ọhụrụ ha.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịkpachara anya dị ka ikpuchi na ịzere igwe mmadụ, ebe 73% na-akọ na ha "na-eyikarị ihe mkpuchi gburugburu ndị ọzọ." Naanị 37% nke akụkọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-eyikarị ihe mkpuchi. Ọnụ ọgụgụ na-eto eto US Ndị bi na ya na-ezere njem na-adịghị mkpa, na atọ n'ime ise - mmụba 7% site na ọnwa gara aga - na-ekwupụta ịkpọasị na omume ahụ.
Ihe dị ka 65% nke ndị America niile gbara ajụjụ ọnụ n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-akọ na ha na-ekpuchi mkpuchi ihu na ndị ọzọ, ebe 64% na-ekwu na ha na-ezere nnukwu ìgwè mmadụ - ọnụọgụ abụọ ahụ na-egosipụta mmụba sitere na 57% bụ onye kwuru ee ajụjụ abụọ a n'ọnwa gara aga.
Mgbe mbụ ndị ọkà mmụta sayensị na-akọ na omicron Ndịiche dị iche iche tụrụ aro na ọ bụ kpọmkwem "dị nwayọọ" - ma ọ bụ opekempe - mgbanwe ndị America na-echere, gọọmentị gburugburu ụwa gbanwere akụkọ ahụ ngwa ngwa iji gosipụta mkpa maka ikike ndị ọzọ, ịgbatịkwu agbam ume, na njikwa ndị ọzọ, yana ọkwa egwu n'ozuzu ya nwere. racheted ya mere.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atọ n'ime mmadụ ise (59%) ndị America ugbu a kwenyere na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa maka itinye aka na mmemme ọha, n'agbanyeghị na 37% nwere otu nkwenye ahụ gbasara ụmụ ha.
Delhi kwụsịrị iwu ịlọta ngwụsị izu ka oke mmiri Omicron na-alalata
Radisson sonyeere otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ...
Ụgbọ elu Turkish na-emegharị ngwa njem ya
Njem nlegharị anya Malta na-ekwupụta na-atọ ụtọ mba ụwa…
Iwu ga-ada mana ọgwụ mgbochi COVID-19 ka kacha mma…
Russia ga-edobe ụgbọ elu mgbazinye...
Ọnwụnwa ụlọ ọgwụ ọhụrụ maka etuto siri ike dị elu yana...
SKAL na World Tourism Network Ajụjụ&A na Ukraine...
Dusit International ahọpụtala onye isi oche ọhụrụ -...
Ọgba ọhụrụ na mmekọrịta: Onye isi ala Rwanda…
UNWTO ga-eme ọgbakọ ihe mberede na nkwusioru…
Ahịa Aspiration & Biopsy Needles: Asọmpi...
LA ga-anabata nnukwu mmemme LGBTQ+ na-esote
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ TIME na-agbasa na UAE, Saudi Arabia, Egypt, na...
Ụgbọ mmiri okomoko na ọdọ Michigan
Ọtụtụ ebe egwuregwu ski na-eme enyi na ezinụlọ na USA
Tie mkpu maka Ukraine na Nzukọ Ndị Ọrụ Taskforce Ndị otu WTTC
New Embassy nabata Extraterrestrials na Planet...
Ihe ize ndụ nke PTSD dị elu 121% ma e jiri ya tụnyere tupu ọrịa na-efe efe
Saudi Arabia welitere mmachi mbata COVID-19 niile maka…
Air Canada nwetara ụgbọ elu Airbus A26neo XLR 321 ọhụrụ
Ndị njem njem United gbara akwụkwọ maka...
Nke a abụghị American Way
Agha nke ndị na-ebu ọnụ ala: ụdị Italiantali!
Ọnwụnwa ụlọọgwụ ọhụrụ maka ọgwụgwọ Melanoma dị elu
Sri Lanka na-atụgharị uche n'iwepụ ego efu ya n'onwe ya…